Luis de Góngora. Afọ ncheta ọnwụ ya. 6 họrọ sonnets | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Luis de Góngora. Afọ ncheta ọnwụ ya. 6 họrọ sonnets
Luis de Góngora. Eserese nke Velázquez.
Luis de Gongora bu, n’agbanyeghi ihe ndi uto n’egwu diri onye obula nke mbụ kacha nwee mmetụta na Golden Age Spanish, ebe enwere ọtụtụ ndị abụ abụ na mbụ. Taa bụ ụbọchị ncheta ọnwụ ọhụrụ nke nwoke a na-anaghi anwu Cordoba ruo mgbe ebighi ebi na oru ya nke ahu asụsụ mgbagwoju anya, jupụtara na hyperbole, ihe nnọchianya na òtù nzuzo, periphrasis na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume. Ichetara gị, nke a bụ nhọrọ nke ụfọdụ n'ime ha ihe ndi ozo.
1 Mụ na Luis de Góngora
2 6 sonnet
2.1 Mgbe ị na-asọ mpi na ntutu gị
2.2 Cga Cordoba
2.4 Gaa Quevedo
2.5 Ugbua isusu ọnụ kristal doro anya aka
2.6 Ihe e dere maka ili Dominico Greco
Mụ na Luis de Góngora
Ikwesiri ikweta. Onye ọ bụla gụrụ Góngora ma ghọta ya (ma ọ bụ chee na ọ na-eme ya) oge mbụ bụ onye nwere ihe ùgwù. Ọbụna n'adịghị m nro nwata nwata akwụkwọ, mgbe izizi ị gụrụ (ma ọ bụ gbalịa ịgụ) akụkọ ifo Polyphemus na Galatea, ọ bụghị ugbu a n'ókè nke ọkara narị afọ M jisiri ike soro ezigbo Don Luis. Nke a bụkwa ebe mma mma, na mma nke ha ọkpọ anyị nakwa na ighikota nke a asụsụ na ole na ole maara otú e si ejikọta dị ka uri Cordovan a na-ede uri.
N’ikpeazụ, ọ bụ eziokwu na ị nọnyere ya dialectical duel na obi ilu enweghị atụ na onye nwere anụ ọhịa ọzọ nke ogo ya, ọ bụ ezie na ọ na-ekwu okwu karịa ka ọ bụ Don Francis Quevedo. Ma yana eziokwu na Don Miguel de Cervantes toro ya na enweghi oke. Na anya nke afọ na-enye na ọtụtụ ịgụ akwụkwọ, lee Góngora anya ugbu a Ọ na-anọgide a ihe ịma aka, ma nke ya omume ọma na okwu.
Mgbe ị na-asọ mpi na ntutu gị
Mgbe ị na-asọ mpi na ntutu gị,
anwụ na-achasi ike ọla edo na-egbu maramara n'efu;
mgbe m lelịrị ya anya n’etiti ndagwurugwu
lee anya ọcha gị nke mara mma lilio;
mgbe na egbugbere ọnụ ọ bụla, ijide ya,
anya ndị na-esochi karịa carnation mbụ;
ma na-enwe mmeri na lush
Site na kristal na-enwu gbaa olu gị dị nro;
enwe olu, ntutu, egbugbere ọnụ na ọkpọiso,
tupu ihe dị n'oge ọgbọ gị
gold, lilium, carnation, na-enwu kristal,
ọ bụghị naanị na ọlaọcha ma ọ bụ viola troncada
ọ na-atụgharị, ma gị na ya ọnụ
n’elu ala, n’anwụrụ ọkụ, n’ájá, na ndò, n’ihe efu.
Oh mgbidi dị elu, oh ụlọ elu
Nke nsọpụrụ, nke ebube, na nke ebube!
Oh great river, great king nke Andalusia,
Nke ezigbo ụlọ, ebe ọ bụ na ọ bụghị ọlaedo!
Oh fertile, oh woli ugwu,
Na ihe ùgwù nke elu-igwe na gilds ụbọchị!
Oh ebube mgbe obula,
Ọ ga-adịkwa ọtụtụ nku ọma ma ọ bụrụ mma agha. +
Nke ahụ na-eme ka Genil na Dauro saa ahụ
Ncheta gị abụghị nri m,
Mgbe kwesịrị m absent anya
Hụ mgbidi gị, ụlọ elu gị na osimiri gị,
Mbara ala na ugwu, oh n'ala nna, oh ifuru nke Spain!
Oh foogu nke ọnọdụ dị jụụ,
Iwe oku, ojo ojoo ojoo!
Oh nsi ọjọọ zoro ezo
Site na ahịhịa ndụ na-acha uhie uhie ruo n'obere na-esi isi!
Oh n'etiti nectar nke nsi nsi,
Na na kristal iko ị na-ewere ndụ!
Oh mma agha na m na ntutu isi ẹkenịmde,
Site n'ịhụnanya siri ike na-agba ọsọ!
Oh ịnụ ​​ọkụ n'obi, nke na-eweta mbibi ebighi ebi!
Laghachi na mwute ebe ị nọ,
Ma ọ bụ na alaeze (ọ bụrụ na ị dabara ebe ahụ) nke ụjọ;
Ma ị gaghị adaba n'ebe ahụ, n'ihi na e nweela ọtụtụ
Na ị na-eri onwe gị ma ị gaghị agwụcha,
Must ga-adị ukwuu karịa hel n'onwe ya.
Spanish Anacreon, ọ dịghị onye nwere ike ịkwụsị gị,
Ekwula n'omume ọma,
Na ebe ọ bụ na ụkwụ gị bụ elegy,
Na nro gi di nke syrop.
You gaghị e imitateomi Terentian Lope,
Karịa Bellerophon kwa ụbọchị
On clogs nke na-atọ ọchị uri
O na-eyi spurs, wee nye ya gallop?
Na-elekọta gị agụụ
Ha kwuru na ha chọrọ ịsụgharị gaa Grik
Anya gi adighi ele ya.
Binye ha obere oge n'anya m,
N'ihi na ewetara m amaokwu ụfọdụ dị umengwụ,
You ga-aghọta ihe ọ bụla gregüesco mgbe e mesịrị.
Ugbua isusu ọnụ kristal doro anya aka
Ugbua isusu ọnụ ọnụ kristal doro anya aka,
ugbua na-arapara m n'olu na-acha ọcha ma dịkwa mma,
na-agbasa ntutu ahụ n'isi ya
ihe ịhụnanya o sere si gold nke ya na-egwuputa,
na-abanye n’ime nkume pel ọma ndị ahụ
Okwu dị ụtọ otu puku na-enweghị isi,
ugbua na-ejide egbugbere ọnụ mara mma
acha odo odo na-enweghị atụ egwu ogwu,
Abụ m, oh doro anyaụfụ,
Mgbe ìhè gị, na-ewute anya m,
o gburu ebube m na chioma m gwuchaa.
Y’oburu n’igwe anaghi enwezi ike,
n'ihi na ha anaghị enye gị iwe karịa,
Damn, dika nwa gi nwoke, nye gi onwu.
Ihe e dere maka ili Dominico Greco
Ọ dị n'ụdị mara mma, oh alhaji,
nke na-enwu ike isi ike,
ahịhịa na-agọnahụ ụwa dị nro,
onye nyere mmụọ n’elu osisi, nyekwa ndụ linen.
Aha ya, ọbụna dino na-adọrọ adọrọ karị
na ahihia nke aha ya dabara,
n'ọhịa na-egosi site na ili mabili:
bọọ ọ́bọ̀ wee gaa n'ihu n'ụzọ gị.
Grik na-agha ụgha. Nature Nature
Nka; na Art, ihe omumu; Iris, agba;
Phoebus, ọkụ -ọ bụghị onyinyo, Morpheus-.
Nnukwu urn, n'agbanyeghị na o siri ike,
anya mmiri na-a drinkụ, na ole sweats na-esi isi
Sabeo osisi olili ozu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Luis de Góngora. Afọ ncheta ọnwụ ya. 6 họrọ sonnets
Ihu Ugwu nke obi
10 obere edemede si Walt Whitman